ဘဝမော်ကွန်း — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အသက် အသက် အသက် အသက် အသက် အသက် အသက် အသက် အသက် အသက် အသက် အသက် အသက် အသက်
ငါ၏အများဆုံးစောင့်ကြည့် နိုင်ငံရေးအရစည်းဝေးကြီးများ ဤနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်. ငါ၌အများပြည်သူကမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်နှုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ထောက်ခံသူများကိုကူညီဒါပေမဲ့ Over-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ဘူး. ကစင်မြင့်ပေါ်မှာရှိသမျှသောလူတဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဇာတ်လမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ကြီးမားတဲ့ကတိတော်နှင့်သင်တို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစား.
ငါဝန်ခံပါလိမ့်မယ်, သူတို့၏အလိုဆန္ဒများအချို့ကိုမြင့်မြတ်သောခဲ့ကြ, ဒါပေမယ့်မိန့်ခွန်းအများစုကိုတွက်ချက်ခံစားခဲ့ရ, ဗလာ, နှင့်သက်သက်သာနိုင်ငံရေးအရ- ငါ့ကိုအနည်းဆုံး. ထိုစကားမှတ်တချို့ကလည်းဖြောင့်ဖွင့်မမှားခဲ့ကြ. သို့သော်ပလက်ဖောင်းဆွေးနွေးဒီ post များ၏အချက်မဟုတ်ပါဘူး.
ငါသဘောပေါက်မှုအရာတို့ကိုတပါတီများသင်သည်သူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရောင်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြစဉ်ကခဲ့, သူတို့လညျးသင်သည်သူတို့၏ worldviews ရောင်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြ. သူတို့ကိုအလိုအရ, ပစ္စည်းကို propserity ကတိထားရာပြည်, နှင့်၎င်းတို့၏ပါတီသည်သင်၏မောရှသေညျဖွစျဖို့လိုသည်. သူတို့၏အမြင်တွင်, သငျသညျကွိုးစားအားထုသည့်အခါကောင်းသောအသက်တာကိုချမ်းသာကြွယ်ဝရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်၎င်းတို့၏သမ္မတလောင်းထိုပြည်၌သင်တို့သည်ယူနိုငျသူကိုကယ်တင်သောသခင်သည်.
အခုတော့ဥစ္စာဓနအကြောင်းအပွစျရှိဘာမှမရှိဘူးင်. ထိုအခက်ခဲအလုပျအတှကျဆုခခံကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်ပါသည်, ဘယ်မှာငါတို့မြော်လင့်သည်မုသာသို့သော်မဖွစျနိုငျ. စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးပန်းတိုင်ကမဖြစ်သင့်ပါဘူး, ကကြီးမြတ်ဆုံးမှတစ်ဦးနည်းလမ်းများဖြစ်သင့်. ငါတို့သည်လည်းရန်မတတ်နိုင်…
လူ Up ကိုညီလာခံအဘို့အ Register ဒီမှာ နှင့်ငါ့အယ်လ်ဘမ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ “အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ” ဒီမှာ
တွင် 2006 ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအယ်လ်ဘမ်အပေါ်, သူတို့ကသာလျှင်သိလိုလျှင်, ငါကသူတို့ကိုသိလိုသူတစ်ဦးဘုနျးကွီးသောဘုရားသခင်အကြောင်းလူတွေကိုပြောပြချင်ခဲ့တယ်. တွင် 2008, "20/20″ ထွက်. ငါကိုမှန်ကန်ရူပါရုံကိုနှင့်တကွသခင်ဘုရားကိုမြင်ရဖို့ဆိုတာဒီလူတွေကိုအားပေးချင်တယ်.2နှစ်ကြာပြီးနောက်, "နှစ်ဦးအကြား…
ရက်သတ္တပတ်တစ်စုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့, ငါဧဝံဂေလိမှယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့တာဝန် ပတ်သက်. ကျောင်းပရဝုဏ်ကွင်းဆင်းအမျိုးသားညီလာခံမှာပွောဆို. ငါ့အကိုစာသားခဲ့သည်2ကောရိန္သု 5:18-21. ဒီနေရာတွင်က session တစ်ခုကနေဗီဒီယိုရဲ့.
တစျခုမှာဘဝက | င်းကိုမျှဝေမည် – ခရီးစဉ် Lee က မှ ကျောင်းပရဝုဏ်ကွင်းဆင်း အပေါ် Vimeo.
သငျသညျစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်, ဒီနေရာမှာကိုယ့်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်တစ် panel ကဆွေးနွေးမှုကနေဗီဒီယိုရဲ့. အဆိုပါဆွေးနွေးမှုကျောင်းဝင်းဝန်ကြီးဌာနအကြောင်းခဲ့သည်, ဒေသခံခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, မဟာကော်မရှင်, စသည်တို့ကို:
သင်းအုပ်ဆရာ Panel ကို မှ ကျောင်းပရဝုဏ်ကွင်းဆင်း အပေါ် Vimeo.
Plus အား, ငါသည်သင်တို့ကိုထုတ်စစ်ဆေးအကြံပြုပါသည် လူအပေါင်းတို့သည်အခြားမီဒီယာ အဆိုပါကွန်ဖရထံမှ. ငါသည်သင်တို့ကိုကတည်ဆောက်ခံရဖို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ထင်ကြီးသှနျသငျတန်ချိန်ရှိခဲ့သည်.